Published July 3, 2021 at 2:57 PM CDT
Kuni kanumaan osoo jiru state guutun ammati hir’ina rooba akka qaban mul achuu jiru. U.SDroughtMonitor akka mullisuti Iowa keessati gogiinsi 85% mulatte akka jiru himan. Torbaan darbee san irraa 7% gad xiqqaate jira. Garuu, jia sadiin darbe irraa harkaa sadihii dabalaan kan taruudha.
Naanoyni Iowa kamuu gogiinsa haala lama jiru keesati hin galmooyne. Haatau malee, irri guddaan northwest Iowa gogiinsi akka mulatte jiru himan.
Nebraska State lawmaker wanna fayyaa irrati ijoolle xixiqqoo waae gender identity fi gender expersion hedan akka hin barsiifne gaafata jiru. Senator gabaasa waliigala kan locan school boards irrati kennani jiru.
Sanbata kan park keesati torbaan dhumaa kan qophaahu ta’a.freemusicfestival kun sababa Covid19 halkan edaa kan haqame ture.Qopheen kunis halkan kan qophaahufi bor bakka parki GrandviewPark guyyaa lamaaf kan qophaahu akka tae himan. Sirbi muraasni AJR kan ufkeesati qabe halkan har’aa kan qophaayu yoo tau guuyyaa boruu ammoo WakaFlockaFlame,ValerieJunefiJohnFogerty kan irrati argaman ta’a
Oromo News 06/30/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Jiraattan SiouxCity tokko kan safara…